Rudzi: kuvaka nekugadzirisa
Zvinoita here kurasa marara ekuvaka mumidziyo? Uye nei ipapo paine mhando dzakasarudzika dzemitumbi kubva kumarori marara padyo? kwete zvekurasa marara, eh? Uye tsvina yezvokudya inoraswa zvakasiyana ...
Chii chekuita nezvasara zvekupedzisa (Wallpaper, mataera, mapaneru, ...) mushure mekugadziriswa?
Chii chekuita nezvasara zvekupedzisa (Wallpaper, mataera, mapaneru, ...) mushure mekugadziriswa? Kazhinji hadzishandiswe munzira ipi neipi, asi dzinochengetwa kuitira kukanganisa kwekushongedzwa kwapera. Semuenzaniso, une mataera akati wandei asara, ...
Chii chinonzi zita reiyo niche mumadziro emubhedha? Iyi niche inonzi quot; alcovequot ;. Iyo niche inogadzirwa yakanangana nemubhedha, nenzira, inyanzvi uye inoshanda kugadzirwa. Iyo niche iri pamadziro yemubhedha inonzi alcove. ...
Nzira yekudhirowa imba mu3D? Izvi zvinofanirwa kuitwa nenyanzvi. 2. Kana iwe uchida kuita zvese iwe pachako, tarisa kunongedzo 1. Unogonawo kubata mazino ako pachako, asi nekuda kwechimwe chikonzero munhu wese anomhanyira ku ...
Ndezvipi zvakafanana nesimende? Vanotsiva? Cement zvinotsiva - kuvaka gypsum (alabaster), magnesia simende, girazi remvura, mune vakawanda vanosunga. Izvi zvinhu zvinoshandiswa kugadzirwa kwezvinhu zvekuvaka: yakasanganiswa yekuvaka misanganiswa (putties, plasters), drywall, ...
Ungaongorora sei kunaka kwechivako chitsva? Ehe, haugone kuvatsanangudza neimwe nzira, kana usiri nyanzvi, saka zvakavanzwa. Kana ivo vari, saka ivo vanozobuda zvishoma nezvishoma, pamwe kwete ...
Nzira yekusarudza chaiyo Euro windows? Euro windows inogona kuve yemapuranga, aruminiyamu uye mapurasitiki, aya ndiwo akawandisa.Ingosarudza chimiro chepurasitiki chinogadzirwa nemawindows, hapana akawanda acho.Iyi ndiyo Korea yeKorea mbiri (zvisingawanzoitika, asi, mune yangu ...
Nzira yekudhonza sei mvura kubva kuatlantic boiler? Mvura inofanira kudururwa kubva kune inotonhora bhaira. Isu tinovhara pombi inotonhorera yemvura pamberi pebhaira. Isu tinovhura iyo inopisa pombi pane vanosanganisa, kana mvura ichidonha, isu tinopfiga pombi. Isu tinosunungura vharafu, ...
Maitiro ekudzidza maitiro ekugadzirisa komputa iwe pachako? Zvakanakisisa kuita hushamwari nemunhu anoziva uye zvishoma nezvishoma kuongorora mune zvakavanzika. Kutanga iwe unofanirwa kudzidza maitiro ekugadzirisa matambudziko emunhu mabhuroko. Zvino, kana iwe uine ruzivo (kana ...
Ko laminate pasi pano inogona kuiswa pamusoro pekare parquet? Inogona kuiswa pamusoro peiyo yekare kana pasina kuzvimba, kunyorova kana kuumbwa. Izvo zvinokwanisika kuisa laminate pasi, asi kana iyo parque yakachengetedzwa zvakanaka, hapana misiyano yepamusoro, saka ...
Chii chiri nani kana yekuzvibata-tora sikuruu? Mhoro vadikani mubvunzo mubvunzo. Ngatitangei nenyaya yekuti kune chete screws mumifananidzo iwe yawakaendesa. Iko hakuna kusimbiswa ipapo. Iyo yekusimbisa inoratidzika seiyi. Zvino dzokera ku ...
Chii chinonzi bofu hwindo?
Chii chinonzi bofu hwindo? Hwindo ihwo hwakatenderedzwa-girazi hwindo, kuvhura kumadziro, kune mwenje uye kufefetedza kwemukati. Hwindo rakapofumara niche mumadziro, kutevedzera hwindo rakaiswa nezvinhu zvekuvaka .. Hwindo rakadai haritenderi ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pesimbi uye brazing? Welding ndeye yemuchina kubatana kwezvikamu nekupisa kubatana kusvika kunonyungudika kwesimbi, ichiteverwa nekuunzwa kwemafirita ezvinhu munzvimbo yesimbi, iyo zvakare inopisa ...
Chii chaunogona kuchera zuva rega rega kwemakore maviri akateedzana? Zvichida rudzii rwechibvumirano chiri muvakidzani quot; inofambisa quot ;, shanda pamba. Tevedza anodzora asingaregi, tora ladle pamusoro pepani isina chinhu pamusoro penzeve yake, uchiti: ...
Ndeapi ekutanga kuverenga emamita emvura pakutenga? Usazvidya moyo pamusoro peizvi. Humbowo huchaiswa muchibvumirano natenzi anozoisa chisimbiso. Uye zvakare, iwe unogona kuve nezvose zvakadzama ...
Munhu anoshanda panzvimbo dzekuvaka akafanana nemuranda here?
Munhu anobata kunge muranda pane nzvimbo dzekuvaka here? Muranda nemushandi makirasi akasiyana zvachose. Muranda haagamuchire muhoro, anoshandira izvo zvekuti anodyiswa. Mushandi anotambira muhoro weiyo ...
Maitiro ekuronga nzvimbo yebasa yemhizha kumba? Uye chii chaunoshanda nacho? Kana mafuta .. saka tenga sketchbook. Zvese zvaunoda zvinokwana mazviri. Kana basa racho risina kunyanya kukura, saka sketchbook inogona kushandiswa ...
Chii chinonzi asphalt: dema kana grey - nei?
Chii chinonzi asphalt: dema kana grey - nei? Asphalt ine dombo rakapwanyika kana mavhu, jecha nebhitumini. Bhitumini inowanzo kuve nhema kana nhema yakasviba muvara, saka mune dzidziso iyo asphalt inofanira kuve nhema ...
Ndekupi kwekutanga kugadzirisa imba yekuzvipedzisa-wega? Kugadziriswa kwakajairika kunotanga nehurongwa uye fungidziro - chii chekutanga kutanga, kunyangwe tikachinja pombi dzemvura, chii chekutanga kutora, kunyangwe tikachinja
Ungachinja sei pombi yekugeza? Kana iwe uine mvura inoyerera ichibva pasi payo chrome-yakafukidzwa hose pombi, saka quot; kupomeraquot; mune iri iriphubhu yerabha yakatsemuka padanho rekubatanidza kune musanganisi. Zvakakwana kucheka ...
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,450 masekondi.